musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Mabhizinesi ekufamba kuti apedze zvakawanda pane tekinoroji gore rinouya
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • UK Kuputsa Nhau
“Idzi inhau dzakanaka kune vatengesi veindasitiri yehunyanzvi hwekufambisa, vanogadzira, vanogadzira uye vanoisa mari. Kuzvipira kushandisa mari yakawanda pane tekinoroji chiratidzo chekuti indasitiri iri kutanga kuvaka patsva mushure mekuparadza kweCovid kusvika parizvino.
Makambani ekufambisa achatanga kukwidza tekinoroji yavo gore rinouya, inoratidza tsvakiridzo yakaburitswa nhasi (Muvhuro 1 Mbudzi) neWTM uye yayo sisi-chiitiko Travel Forward.
Vamwe mazana manomwe nyanzvi kubva kutenderera pasirese vakapa iyo WTM Indasitiri Report. Paakabvunzwa nezve hurongwa hwekushandisa tekinoroji ye700, mhinduro yaive yakanaka kune vangangosvika vana-mu-gumi (2022%) vachiti bhajeti ravo raizokwira zvichienzaniswa nevatatu-mu-gumi (39%) vari kuronga kushandisa zvishoma. Vanopfuura mumwechete-mu-gumi (29%) havasati vasarudzwa muna 12 nepo 2022% ichange iine bhajeti rakafanana neregore rino.
Huyero hweshanduko kune mabhajeti hunoburitswa zvakare. Vanamazvikokota vakadai - vanosvika zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana - vakati bhajeti ravo richadzikira nechikamu chinodarika gumi kubva muzana sezvanzi mabhajeti avo achawedzera nezvikamu zvinodarika gumi kubva muzana. Musiyano wacho wakanyanya kucherechedzwa kune avo vaitarisira kuzununguka kweisingasviki chikamu chimwe chete mugumi, ne15% vachitarisira kuderera kudiki kana vachienzaniswa ne10% vachitarisira kukwira kudiki.
Simon Press, Exhibition Director, WTM London uye Travel Forward: “Idzi inhau dzakanaka kune vatengesi veindasitiri yehunyanzvi hwekufambisa, vanogadzira, vanogadzira uye vanoisa mari. Kuzvipira kushandisa mari yakawanda pane tekinoroji chiratidzo chekuti indasitiri yave kutanga kuvaka patsva mushure mekuparadza kweCovid kusvika parizvino. "
Press yakawedzera kuti vatengi vanopfuura mazana mana vari kupinda gore rino WTM London uye chiitiko chehanzvadzi yavo Travel Forward varatidza kufarira kutaura nevanopa tekinoroji. "WTM yagara ichidada nekuona kuti kana tichitaura nezvevatengi, tiri kutaura nezve vanhu vane mvumo yekuita sarudzo uye kusaina zvibvumirano," akawedzera.
"Pamusika pane tekinoroji yeanenge ese maindasitiri ekufambisa uye tine chivimbo chekuti vatengi vanogona kuwana varatidziri vane, kana vanogona kuvandudza, zvavanoda kuti vakurumidze kupora."